Western Digital Data Recovery - Celinta Faylal ay ku WD Hard Disk Drive
Xogta laga badiyay ka Western drive Digital adag!
Si qalad ah la tirtiro files muhiim ah oo ku saabsan WD disk adag, oo aan iyaga lagu dalban karo ka Recycle Bin ee Windows ama Trash ee Mac. Si kasta oo ay u soo celiyaan kuwa files tirtiray on WD disk adag?
Dhaco formatted drive WD adag iyo illoobin in ay dib u dirto qaar ka files aad u muhiim ah. Ma suurogalbaa in la soo celiyo files tirtiray ay sabab u tahay formatting?
WD drive adag kharribeen ay sabab u tahay kedis ah korontadu. WD drive noqday geli karin! Sida loo soo celiyo files ku drive WD adag?
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada Western drive adag Digital?
Haddii aad taageeray content ee drive WD adag, si fudud in aad u soo celin kartaa ama kaliya nuqul aad disk. Haddii aan, ka dibna waxaad u baahan tahay WD kabashada xogta drive adag ka caawinaya in aad dib u hesho dhammaan faylasha lumay. Wondershare Data Recovery noqon kartaa wax fiican doorasho. Tani kabashada si sahlan loo isticmaalo xogta ku haboon yahay oo dhan isticmaala computer, oo u noqon kartaa xaaladaha khasaaro file kala duwan ee Western drive Digital adag.
Waayo, kuwa isticmaala Mac OS X, u leexdo xagga Wondershare Data Recovery for Mac , taas oo diyaar u ah Mavericks hadda.
Waa sahlan oo soo jiidasho leh si hawshan ay u dhammeeyaan soo kabashada. Just gashato kabashada xogta on your computer (la version midig), bilaabaya geedi socodka 3-tallaabo dib u soo kabashada iyo aad u soo celin kartaa files lumay istareexsan weyn.
4 tallaabooyin ay ku soo kabsadaan xogta Western drive adag Digital
Tallaabada 1 Connect aad Western Digital adag la wado la your computer iyo bandhigista Wondershare Data Recovery rakibay it on.
Tallaabada 2 Dooro nooca file in aad ku socoto dib u soo ceshano ka Western Digital drive adag dibadda ah.
Tallaabada 3 Dooro drive Western Digital adag oo guji "Next" si aynu barnaamijka faylasha scan ku yaal.
Tallaabada 4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo soo celinta xogta ka drive adag Digital Western
Waxaad calaamadee karaan faylasha aad rabto in aad ka soo kabsado aad drive Western Digital adag oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Digniin: marka aad soo kabsado aad files WD, waxaa lagu talinayaa si loo badbaadiyo files soo kabsaday in qalab kale disk ama kaydinta adag in kiiska isha files yihiin overwritten.
Video tutorial soo kabashada xogta Digital Western
Waa maxay sababta kabashada xogta Western Digital suurto gal ah?
Haa way tahay! Arrinta No files waxaa dhammaan laga tirtirayaa aad gaari ku adag Digital Western ay sabab u tahay tirtirka shil ah ama formatting, xitaa weerar virus. Files ayaa waxaa lagu ma si joogto ah la tirtiro sida arrin xaqiiqada. Marka aad ka soo dibadda ee tirto faylasha, ay garab Recycle Bin ama Trash Bin sida ma jiraan wax shaqo-warshadaynta on WD drive adag dibadda. Laakiin files weli waa dhawrsan waxaa ku disk ee drive WD adag, iyo si fudud u meel halkaas oo files kuwa degan hadda calaamadeeyay sida loo heli karo in lagu overwritten. Formatting sidoo kale la mid ah. Ilaa iyo inta meel bannaan oo aan la overwritten, waa mid aad u suurto gal ah si ay u soo celiyaan ka drive Western Digital adag.
> Resource > Ladnaansho > Digital Western Data Recovery: Sida loo Soo Celinta Faylal ay ku WD Hard Disk Drive